Antso ho an’ny ekipa KatrinaHelp.info nandritra ny rivo-doza Katrina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2018 9:07 GMT
Mpanorina marobe sy mpikambana ao amin'ny bilaogy sy wiki, SEA EAT (Horohorontany sy Tsunami tany Azia Atsimo Atsinanana), izay nahasarika ny sain'izao tontolo izao tamin'ny Tsunami ny volana Desambra 2004, no nanentana indray ireo mpilatsaka an-tsitrapo mba hanao izay kely vitany ho an'ireo niharam-boina tamin'ny rivo-doza Katrina. Natao hisarihana ny sain'ny olona samihafa maro tamin'ny fotoana iray manerana izao tontolo izao ny tambajotra KatrinaHelp Wiki . Naneho ezaka mazava sy mivantana tamin'ny fanampiana ny fandrindrana, ny fifandraisana, ary ny fiaraha-miasa ho famonjena, fitsaboana ary ny ezaka fanampiana ireo niharam-boina izany.
Nisy ny bokotra ho an'ny olona nila fanampiana mba hiantsoana ny ekipa KatrinaHelp.info tamin'ny alàlan'ny kaonty Skype. Naely izany mba nahafahan'ireo olona mila fanampiana niantso. Nanana mpilatsaka an-tsitrapo sy mpiara-miasa avy amin'ny trano fialofana izy ireo ary mpamonjy voina sy sampan-draharaha mpamonjy voina hafa tany an-toerana niaraka tamin'ny fitaovana fanampiana.
Sary iray antsoina hoe katrinahelpskypemebutton.JPG
Nisy ny antsipiriany momba ny fomba fampiasana ny antso fanampiana sy ny antso an-telafaonina niaraka tamin'ny fangatahana fanampiana, sy ny fanolorana fanampiana. Noraisina tany amin'ny famelan-kafatra ireo olona raha toa ka nisy ny antso mbola ampiandrasana. Nomena mazava fotsiny ny anarana sy ny momba momba ilay olona nila fanampiana mba nahafahan'izy ireo namerina niantso azy ireo.